Shona | Lisk Academy Translate
Chii chinonzi LISK Academy?
Mauya kune zvinokosha paBlockchain
Chii chinonzi blockchain?
Blockchain kwauri semunhu ano makore mashanu chii? Nhoroondo ye mari
Nhoroondo ye mari Blockchain inoshanda here? Chii chinonzi peer to peer network? Tsananguro ye Blockchain cryptography Chii chinonzi digital signature? Chii chinonzi node? Chii chinonzi hashing? Kuwirirana kwe blockchain Chii chinonzi Byzantine fault tolerance? Chii chinonzi Proof of stake?(Pos) Chii chinonzi Delagated Proof of Stake? (DPoS) Chii chinonzi Proof of Work (PoW)
Zvatinowana kubva ku Blockchain
Chii chinonzi kuchengeteka kwe Blockchain? Chii chinonzi Decentralization? Kuchengetedzwa kwe magwaro eblockchain? Kuva pachena kwe blockchain kotsanangurwa. Sei blockchain risina basa nekuvimbwa naro?
Smart contracts nema Dapps Hurumende isiri panzvimbo imwe Blockchain muma bhanga Blockchain muHutano Blockchain muTechnology nemu Dzimbae Blockchain ne IoT Blockchain ne panochengeterwa data.
Mauya ku bhizimusi pa blockchain
Zvinoshandiswa Blockchain muma Bhizimusi.
Blockchain mukushambadza Blockchain mukutengeswa kwezvinhu Blockchain muHR Blockchain muhwu Mabharani Blockchain muhungwaru hwema bhizimusi
Blockchain mu Bhizimusi
Kuvaka nharaunda ye blockchain Unoshambadza basa rako re blockchain sei? Mitemo iri kuiswa mu blcokchain
Chii chinonzi cryptocurrency?
Ma Cryptocurrencies anopihwa kukosha sei? Unotenga nokutengesa ma cyrptocurrencies sei? Unochengetedza ma cryptocurrencies ako sei?
Chii chinonzi ICO?
Kutsanangura kuti Whitepaper chii Usati wapinda mu ICO Unopinda sei mu ICO Matambidziko anouya nekupinda muICO Unoitawo ICO yeko sei
Lisk academy inoita nezve kudzidzisa vanhu nezve blockchain tecnlogy pasi rose nenzira inonakidza. Blockchain rinonetsa kunzwisisa asi zvakakosha kuti vanhu varizive. Pano tinoedza kukudzidzisai zvose izvi ne nzira iri nyore.Lisk Academy, yakagadzirwa kuti uzive zvose nezve blcokchain panguva imwe chete.
Blockchain technology ichitsanangurwa zvirinyore.
Magwaro mazhinji eku Lisk Academy anoita kuti munatso kunzwisisa. When writing the Lisk Academy, Isu veku Lisk academy patinonyora tinioedza kuisa zvidzdzo zvizvinji panguva imwe kuitira kuti munhu wese anatso kudzidza uye nekubata.
Asi takawedzera zvimwe zvinoita kuti zvivwe nyore kuti munzwisise. Zvakaita se: Blockchain glossary.
Chimwe chokwadi chinonakidza chinobuda chakadai.
Dzimwe tsananguro dzine hudzamu dzinobuda mumabhokisi akadai.
Ngwarira kuteereresa kana ukaona zvinhu zvakadai.
Tine zviuru zvemimananhidzo yakadai, ichakubetserai pakuverenga.
Uyewo tine zvmwe zvimananidzo pazasi.
Mungatizivisa zvamungada kutaura pazvidzidzo zvenyu pa academy@lisk.io.
Gadzirirai kuwana simba re blockchain ne lisk academy.
Kuuya kweBlockchain kuri kuonekwa sechimwe chechinhu chikuru chakakwanisa kugadzirapasirino, tinokwanisa kufananidza chiitiko ichi nekugadzirwa kwe internet, zvokuti yakapihwa zita rokut“The Internet 3.0”. Nyangwe zvapo paine zvingaita kuti blockchain ichinge maonero atinoita nyika, vazhinji havasati vava kunatso kuziva kuti blockchain chii, inoitei,uye sei chiri chinhu chikuru kudai.